သင်သည်မကျင့်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းသင်ပြောပြမှကြွလာသောအခါသုံးစွဲညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်းရှိပါတယ်၊တကယ့်ကိုအလွန်အနည်းငယ်ခရီးစဉ်ဒေသဖြစ်ကြောင်းအထိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ကြည့်၊အဆိုပါအရာဖြစ်ပါသည်၊ထိုလုပ်ငန်းသည်ဘယ်တော့မှမယ့်ခဲ့သောအမျိုးအစားဘတ်ဂျက်များအတွက်သင့်လျော်သောသောထုတ်လုပ်မှု၏ဂိမ်းများမျှော်လင့်ထားကြသည်အတွက်ဤနယ်ပယ်။ ကံကောင်းတာကသင်တို့အဘို့အ၊အားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်း၊ငါတို့သည်တည်ဆောက်လေပြီထုံးစံပလက်ဖောင်းမှမြှုပ်နှံအလွန်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစား။ ဤဖြန့်ချိအားလုံးအတွက်ထုတ်လုပ်သော-အိမ်နှင့်သီးသန့်အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ္း:သင်ဒီေဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမှုအရာအတွင်းအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ။, ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းငှါအလိုအကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၊ဒါကြောင့်သင်မြင်နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘိုင်းဂိမ်းကစား။ ဒီတော့လို့မရပါက nab ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝစိတ်ကူးခင်းကျင်း XXX ဂိမ်းများထံမှအကောင်းဆုံးအန္းဖွံ့ဖြိုးဂိမ်းအတွက်၊ဒီအဦးတည်ကြောင်းသင်စဉ်းစားရန်အပ်သောစိတ်။ ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်၊တနည်းအားဖြင့်၊စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်များအတွက်အနည်းငယ်နဲ့ကျွန်မရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သင်သည်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားအားလုံး၏အခြားနေရာများထွက်ရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစား၊ငါသည်သင်ကိုမြင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုအခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!
ပေမယ့်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနည်းပညာပိုင်းအနိုင်ကစားစားပွဲတင်ရး၏အဓိကအာရုံစူးစိုက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ပေးခြင်းလူသုံးစွဲဖို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုသူတို့လက်လှမ်းအပေါ်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများ:အထူးသဖြင့်သူတို့အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူမဟုတ်ခဲ့သည်ငါတို့အဘို့အထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဒီလိုလုပ်ဖို့၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီနည်းလမ်းအခုအများဆုံးလူတွေကိုချစ်ရန်သွားကြသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူရာက္ဇာလက်လှမ်း။ ဆင္ဆာအပေါ်မိုဘိုင်းအက်ပ်ပလက်ဖောင်းအတော်လေးဘုံ၊အထူးသဖြင့်တာယ်အဲဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးဘော်:ဤကိစ္စတွင်မကေနရာျဖစ္သည္။, ကြီးစွာသောအရာကနရာျဖစ္သည္သူတို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်အခြေခံအဖြစ်အဆုံးမဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ၏ရလဒ်အဖြစ်၊အားလုံးရလုပ်ဖို့အတူကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းခဲ့ကြောင်းသေချာစေကအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူအများဆုံးခေတ်သစ်။ ထိုလမ်း၊မည်သူမဆိုနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နိုင်ဖြစ်သင့်ကစားကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကဲ့သို့ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အရာက္ဇာ! စေကျပါတယ်၊လက်ျာ? ငါတို့သည်လည်းဖို့ဆုံးဖြတ်အထူးသဖြင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အန္းဖုန်း–ဂိမ်းအင်ဂျင်ကိုသုံးလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ပိုကောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အစက်ကိရိယာအပေါ်ဖြစ်ကြောင်း။, ရုံသေချာအောင်သင့်ရဲ့သည္ရေးသားနဲ့သင့်ဖုန်းဆီ-ခေတ်မီ–ထိုအခါသင်သှားဖို့ကောင်းနေ!
အရွယ်ရောက်အန္းကလုံးဝအခမဲ့အသိုင်းအဝင်ရောက်ဖို့:ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်၊ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအောင်အမြဲထားငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်နှင့်အတင်းအဓမ္မသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ မကြာသေးမီသမိုင်းသင်ကြားသည်အပင်ပင်ကြီးမားသောဂိမ်းကုမ္ပဏီနေဆဲအကောင့်ဖန်တီးရန်ကြွလာသောအခါမှပြန်လွှတ်ပေးအလွန်မြင့်မား-စျေးစ။ ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ယူမှအရွက်ထွက်၏စာအုပ်၏ဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်:သွားနှင့်ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်–ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ကွာအခမဲ့များအတွက်၊ကျနော်တို့တည်ဆောက်နိုင်တစ်စိတ်ကူးအသံုးျပဳသူမ်ား၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်ပို့တစ်လျောက်ပတ်သောထုတ်ကုန်။, ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှုဖွင့်ကြောင်း၊အဆိုပါဂိမ်းနိုင်ဖြစ်သင့်ရန်ပုံငွေမိမိတို့အားလုံး၏ချစ်ကြည်ရေးချင်သူအသုံးပြုသူများအဖို့အထောက်အကူ။ ကျနော်တို့ရှိသည်ပြုပါရန်အစီအစဉ်များကို၏၊ဒါပေမယ့်လက်ရှိမှာအသင်းကိုလုံလောက်တဲ့ရန်ပုံငွေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေကူးကန်အဲဒီမများအတွက်လိုအပ်လာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ။ ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်သောအရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းများလိမ့်မည်များအတွက်ပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်နှင့်ဤသည်သာအစကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အပျက်သို့အပြာဂိမ်းကစား။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝဖြန့်ချိအပေါ်အောက်တိုဘာလ၏၂၀၂၀:ဒါကပဲအစအခုမှော်!, သတိျအဘယ်သူမျှမဂိမ်းများရှိသည်လိမ့်မည်၊မည်သည့်အချိန်သော့ခတ်တပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်အရာအားလုံး၏အမျိုး:အကိုမတရားအနိုင်ရမှပေးဆောင်အပေါ်အင်္ဂါရပ်များဆို၏။ အဲတစ်ခုအာမခံ!
တဦးတည်းအရာတစုံတခုရှိကြောင်းမုချအနှောငျ့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင်ကွင်းခဲ့လွန်နိမ့်အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်:အတွက်ဒါကပြဿနာတစ်ရပ်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဒီမှာ! ပတ်ပတ်လည်ထက်ဝက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေသွားပြီငှားရမ်းရန်အကောင်းဆုံး ၃D renderers၊အမြင်အာရုံအဆိုတော်များ၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာနှင့်အခြားဆက်စပ်တစ်ဦးချင်းစီအဘယ်သူတစ်ဦးတည်းအလုပ်ကအလုပ်အဂိမ်းများကြည့်ရှုအဖြစ်အံ့သြဖွယ်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ သေချာအောင်၊အဆိုပါဂိမ်းအကြီးအဖြစ်လိမ့်မည်၊ဒါပေမယ့်တကယ်ကဘာဖြစ်သွားရောင်းဖို့အပေါင်းတို့၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဖော်ဖြစ်ပါတယ်။, အများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊ဂိမ္းမကြာခဏအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရုံတစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီ၊နှင့်မကြာခဏဤသာပြုပြီးအဖြစ်ဘေးထွက်ဆိုးစီမံကိန်း:အဘယ်ကြောင့်အဟောင်းတွေဂိမ်းကြည့်တော့အမှိုက်! ကတည်းကကျနော်တို့ရှိသည်ခြင်းငှါရရှိနိုင်သောရန်ပုံငွေများစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားဂရပ်ဖစ်ဒီမိုဘိုင်းဂိမ်းစုဆောင်း၊အဘယ်သို့သောငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်။ သင်တို့သည်ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်ချက်ချင်းအကြားကွာခြားချက်ကအမေရိကန်နှင့်အခြားနေရာများအကြောင်းရှာပေးဖို့သင်အလားတူအမျိုးအစားများ၏အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်တည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့အေၾကာင္းအစီအစဉ်ကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့လမ်းမှအချိန်အကြာလာ။, ကိုယ့်မှာကြည့်ခရီးစဉ်ကိုဒီနေရာမှာနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်အကြားကွာခြားချက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့်အခြားသောအဘယ်အရပ်တို့ကိုပူဇော်ဖို့ရှိသည်–ဒါကြောင့်နေ့ညဉ့်!
ငါထိုင်နိုင်မှာစကားပြောပင်ကြာကြာများအတွက်စေသည်ဘာကိုခန့်အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းဒီတော့မှကွဲပြားခြားနားအားလုံး၏အခြားပတ်ပတ်လည်ခရီး:အစား၊ကျွန်မထင်တယ်အကောင်းဆုံးပဲအကြံပြုလာအပေါ်တွင်အဘယ်အရာကိုမြင်ကတူရဲ့။။။။ ထိုလမ်း၊သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိကိုအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစည်း၏အချိန်ယူပြီးဖတ်ရှုဖို့အဘယ်အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်–သေချာပါစေသင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ခံစားအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းစာကြည့်တိုက်အတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ရှောက်မှုယူ၊အဖြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ရ!